Accueil > Gazetin'ny nosy > Ady amin’ny covid 19 : Mba jereo ireo mararin’ny voa !
Ady amin’ny covid 19 : Mba jereo ireo mararin’ny voa !
Isan’ny sokajin’olona marefo ara-pahasalamana ireo mararin’ny voa (insuffisance rénale) ka nanomezan’ny mpitsabo amin’ny ankapobeny toro-marika manokana mba hitandrina mafy amin’izao vanim-potoanan’ny aretina coronavirus izao. Ireo tratran’io aretin’ny voa io moa dia ianjadiam-pahasahiranana mafy mihitsy eto amintsika satria tsy maintsy manao fanadiovan-dra (dyalise) intelo isan-kerinandro, ary io fanadiovana ra io dia misanda any amin’ny 400.000 ariary any isaky ny manao azy.
Tsy misy fanafana ny tratry ny aretin’ny voa, ankoatry ny fanoloana azy (greffe), saingy sarotra ny fahafahana mahazo izany, indrindra eto amintsika.
Any ampita any dia tsy sarotra ny fanaovana fanadiovan-dra na “dyalise” satria maro ny olona manana ilay fitaovana anaovana izany fa eto amintsika dia tobim-pitsaboana vitsy no manana azy io ka izay no mahalafo azy.
Mandra-pahazo voa hafindra ao amin’ny tena amin’ny alalan’ny “greffe” izany dia tsy maintsy miatrika an’io fanadiovan-dra io in-telo isakerinandro io. Na hamidy hatramin’ny akoho mikotrika sy ny tanin-ketsa aza, hoy ny fitenenana, izany, raha tsy mahita voa hafindra ao amin’ny tena, dia tsy hahita fahasitranana intsony, fa dia maty.
Eo anatrehan’izany, miantso ny fitondram-panjakana ny fikambanan’ireo tratran’ity aretin’ny voa ka voatery manao fanadiovan-drà intelo isan-kerinandro ity mba hijery manokana ny fanalefahana ny vesatra amin’izy ireo momba io sandan’ny fanadiovan-drà io. Nahoana re raha mba avela manao ny fanadiovan-drà maimaim-poana any amin’ny tobim-pahasalamana izy ireo, na amin’izao fotoana iatrehana ny ady amin’ny coronavirus izao ihany aza aloha?
Etsy ankilany, misy sosokevitry ny fikambanan’ny marary voa koa mba ampitaina amin’ny mpitondra fanjakana, satria vahaolana iombonana no katsahina.
Ny mpiasampanjakana tratry ny aretin’ny voa ka manao an’io fanadiovan-drà io dia iantsorohan’ny fanjakana ny lany aminy (prise en charge). Tobim-pitsaboana iray, toa an’ny tsy miankina eto Antananarivo, no miantoka izany fanadiovan-dran’ny mpiasampanjakana izany, ka mirotsaka any ny vola sandan’izany fanadiovana izany, izay ny fanjakana no manefa azy. Re fa mahatratra amin’arivony tapitrisa (miliara) isan-taona ny vola aloan’ny fanjakana amin’io tobim-pitsaboana io, momba an’io fanadiovan-drà io fotsiny, nefa anjatony vitsy ny mpiasampanjakana misitraka izany. Raha io vola natokan’ny fanjakana hanefana ny sandan’ny fanadiovan-dràn’ny marary voa io amin’io tobim-pitsaboana tsy miankina io anefa no ividianan’ny fanjakana ny fitaovana fanadiovan-dra ka apetraka eny amin’ny tobim-pitsaboana na hôpitalim-panjakana, dia ny olom-pirenena rehetra tratran’io aretin’ny voa io, na mpiasampanjakana na tsia, no hahazo tombony aminy. Ka nahoana re raha irosoana izay vahaolana izay, dia misitraka ny fanadiovan-drà tsy andoavam-bola ny rehetra mila izany? Atsipy ny tady ho eny an-tandroky ny omby, atsipy ny teny ho any ampon’ny mahalala!